Sawirka Farshaxanka & Muralka - El Centro de la Raza
Nuestra Historia, Nuestra Comunidad / Taariikhdeena, Bulshadeena
Taariikhda Nuestra, Nuestra Comunidad wuxuu siiyaa qalab fasiraadeed farshaxanka iyo dhacdooyinka taariikhda El Centro de la Raza. El Centro de la Raza waxaa la asaasay 1972 iyada oo si nabad ah ku haysatay dhismaha Dugsiga Beacon Hill. Tan iyo markii la aasaasay, El Centro de la Raza waxay u adeegtay bulshada Latino iyo bulshooyinka kale duwan. Taariikhdeeda oo dhan, El Centro de la Raza waxay ku taagnayd midnimo dhaqdhaqaaqyo badan oo caddaaladda bulshada ah. Taariikhda Nuestra, Nuestra Comunidad waxay iftiiminaysaa farshaxanka iyo codadka dhaqdhaqaaqyadan, kuwaas oo sii wada qaabaynta ururka ilaa maanta.
Mashruucan waxaa taageeray, qayb ahaan, 4Culture/King County Lodging Tax.
Khariidada farshaxanka / mapa de arte:
Sawir -gacmeedkani wuxuu muujinayaa mid ka mid ah ilaahyada qaddarinta leh ee qadiimiga Mexico: Quetzalcoatl. Magaca Quetzalcoatl wuxuu ka yimid erayga Nauatl quetzal, shimbir baalal qurux badan leh, iyo jaakad, oo macnaheedu yahay abeeso. Quetzalcoatl waa abuuraha nolosha aadamaha waxaana la sheegay in uu dadka siiyay hadiyado badan. Mid ka mid ah kuwan wuxuu ahaa farshaxanka iyo farshaxanka, taas oo ka dhigaysa ilaahnimadan mid ay jecel yihiin fanaaniinta. Quetzalcoatl wuxuu kaloo siiyay bini -aadamka hadiyadda beeraha sidaas darteedna halkaan Quetzalcoatl waxaa la dhigaa meel u dhow warshad galleyda. Geedka galleydu sidoo kale waa il muhiim u ah cuntada sidaas darteedna waxay kaloo macno samaynaysaa in lagu meeleeyo halkan Elcentro de la Raza's Cocina Popular. Quetzalcoatl, sababta oo ah labadeeda aqoonsi (shimbir iyo abeesada), ayaa inta badan lagu muujiyaa matalaadda fikradda laba -walaaqda iyo wada -noolaanshaha u dhexeeya dadka iska soo horjeeda. Maqaalkani wuxuu u qaybsan yahay bidix iyo midig muuqaalada habeen iyo maalin iyo inta u dhexeysa kor iyo hoosna muuqaalka dhulka iyo cirka.
2. Salvador Allende iyo Los Chilenos
Salvador Allende wuxuu ahaa madaxweynaha Chile intii u dhaxeysay 1970-1973. Isaga oo ah madaxweyne hantiwadaag ah oo furan oo reer Chile ah wuxuu dejiyay dib -u -habaynno kala duwan xagga waxbarashada dadweynaha, guryeynta iyo barnaamijyada caafimaadka wuxuuna warshado badan oo gaar loo leeyahay ku wareejiyay lahaanshaha dawladda. In kasta oo siyaasadahaani ay ka faa'iideysteen dad badan oo reer Chile ah oo shaqeeya, haddana waxaa jiray kuwo doonayay inay meesha ka saaraan waxay u arkeen inuu yahay madaxweyne khatar ah oo shuuciyad ah. Bishii Sebtember 11, 1973, afgambi uu Mareykanku taageeray ayaa afgembiyey oo dilay Salvador Allende. Nidaamka cusub ee uu hoggaamiyo Augusto Pinochet ayaa ciqaab adag ku riday taageerayaashii hore ee Allende, oo ay ku jiraan fannaaniin badan iyo waxgaradka bidixda. Dabayaaqadii 1970 -yadii, reer Chilean waxay u qaxeen Mareykanka si ay uga baxsadaan cadaadiska. Qaxootigu waxay ku dhammaadeen Seattle iyo El Centro de la Raza sannadihii hore ee ururka. Dadka reer Chile waxay keeneen wacyigelin siyaasadeed oo qiimo leh waxayna saamayn ku lahaayeen samaynta El -Centro de la Raza 12 -kii mabaadi'da. Mabaadiidaan, oo la soo saaray 1976, waxay gacan ka geystaan ​​hagidda aragtida iyo hawlgalka ururkeenna ilaa maanta. Waxaan ugu magac darnay Qolka 106 “Sala Salvador Allende” si aan u maamuusno xusuusta hoggaamiyahan dhiirrigelinta leh oo, intii uu madaxweynaha ahaa ka shaqeeyay hagaajinta nolosha dadka saboolka ah ee reer Chile. Qolkani wuxuu kaloo maamuusayaa dhammaan bulshada reer Chile iyo taageeradooda El Centro de la Raza.
Muraayadan dhalaalaya oo quruxda badan ayaa ah soo dhaweynta ugu fiican ee Xarunta Horumarinta Carruurta José Martí ee El Centro de la Raza. Uxmal, oo ah farshaxaniiste Guatemala ah, ayaa rinjiyeeyay darbigan si uu ugu mahadceliyo El Centro de la Raza oo ku taageeray markii ay timid Mareykanka.
Xayawaanka iyo dhirta midabada leh ayaa ku hawlan carruurta Xarunta Horumarinta Ilmaha. Waxay la hadlaan qiyamka kala duwanaanshaha deegaanka iyo dhaqanka.
Ilaalinta dhaqameedku waxay ahayd walaac muhiim u ah magaca Xarunta Horumarinta Carruurta, José Martí (1853-1895). José Martí, oo ah geesi qaran oo reer Cuba ah, ayaa ka hadlay saamaynta waxyeellada leh ee gumaysiga Isbaanishku ku yeeshay dalkiisa Cuba wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo kala duwanaanshaha dhaqanka.
Xoolaha dhexdooda ku kala firdhay wuxuu kaloo heli karaa magacyada shaqaalihii hore iyo mutadawiciintii El Centro de la Raza. Tusaale ahaan, bidixda fog ee darbiga, waxaa ku yaal magaca “Roberto” oo ku dul qoran shimbir yar oo aan si fiican ula jaanqaadi abuurka kale ee kulaylaha. Tani waxay Uxmal u ahayd maamuuska El Centro de la Raza ee Agaasimaha Fulinta ee mudada dheer Roberto Maestas. Waxaa lagu sawiray inuu yahay waddo -wadne, shimbirta gobolka ee gobolka uu ka soo jeedo ee New Mexico.
4. Xarunta Horumarinta Carruurta
Carruurta iyo dhallinyaradu waxay ahaayeen diiradda muhiimka ah ee El Centro de la Raza taariikhdeeda oo dhan. Waxaa ku jira 12 mabaadi'da haga ee El Centro de la Raza waa hadafka ah "in la ixtiraamo lana aqoonsado xuquuqda carruurta inay yihiin xubno buuxa oo mudnaan u leh bulshadeena". Xaqiiqdii Xarunta Horumarinta Carruurta ee Jose Marti waxay ka mid ahayd barnaamijyadii ugu horreeyay ee halkan ka jira El Centro de la Raza. Markii ururku ahaa fasalka hoose ee ardayda ESL, waxay bilaabeen inay ogaadaan baahida loo qabo kobcinta, daryeelka carruurta laba luqoodka ah ee carruurtooda. Ardaydan ayaa isu timid waxayna abuureen barnaamij xannaanayn carruur oo daboolay baahida labada waalid iyo carruurta.
Jose Marti, oo ah magaca Xarunta Horumarinta Ilmaha, wuxuu ahaa qof dhiirrigelin u ah taariikhda Cuba oo tusaale u ah aragtida El Centro de la Raza. Sanadihii hore ee El Centro de la Raza, xubno badan oo ka mid ah shaqaalaha ayaa awooday inay booqdaan Cuba oo ay wax badan ka ogaadaan saamaynta Jose Marti ku yeeshay dadka Cuba. Wuxuu dhashay 1853, wuxuu u adeegsaday hibadiisa gabyaa iyo saxafi si uu uga hadlo cadaalad darrada gumeysiga Isbaanishku ku hayo Cuba. Sababtoo ah qoraalkiisa u ololeeyaha ayaa la xiray waxaana ugu dambeyntii loo masaafuriyey Spain. Wali wuxuu sii waday inuu daabaco gabayadiisii ​​xiisaha badnaa, curisyadii iyo maqaalladiisii ​​markii uu u safrayay Mexico, Guatemala iyo New York. Wuxuu ku laabtay dalkiisii ​​hooyo si uu ugu dagaallamo dagaalladii hore ee madaxbannaanida Spain 1895kii. Sida Jose Marti yiri, "waxaan u shaqeynaa carruurta maxaa yeelay waa kuwa yaqaan sida wax loo jeclaado, maxaa yeelay waa carruurta rajada adduunka."
Bogag: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4